Momba anay - Danyang Yixun Machinery Co., Ltd.
DANYANG YIXUN MECHINERY CO., LTD－ Dia fanamboarana matihanina hamokarana milina fanaovana taolana marolafy / biaxial, milina fanjairana fametahana kofehy ary milina fanenomana lamba famaohana ho an'ny fibre fitaratra, fangaro mitambatra, fametahana randram-baoty voadidy ary famokarana lamba toy ny orinasa lehibe: KARL MAYER, KARL MAYER MALIMO, LIBA, RUNYUAN.
Ireo mpiara-miombon'antoka amin'ity orinasa ity miaraka amin'ny mihoatra ny 15 taonaamin'ity orinasa ity dia manana patanty famoronana mihoatra ny folo izahay.YIXUN dia manome ny vahaolana ara-teknika sy ara-barotra mety tsara ho an'ny vokatra sy serivisy rehetra. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny tombotsoan'ny mpanjifa faran'izay betsaka dia nahavita lasa servisy tsena eran-tany izahay mba hahitana vahaolana tonga lafatra amin'ny fikolokoloana karana, fiomanana hoavin'ny tenona sy lamba teknika.
Amin'ny maha mpiara-miasa maharitra sy azo itokisana dia manamby ny tenanay izahay mba hanaterana vokatra avo lenta hatrany amin'ny faritra rehetra.
Toy ny orinasam-pianakaviana tsy miankina ara-bola manana traikefa an-taonany maro amin'ny varotra dia manohana ny fifaninanana sy ny fahombiazan'ny mpanjifanay izahay. Amin'ny maha-mpamatsy vahaolana vaovao antsika dia manome toky koa izahay fa hanana fiarovana avo lenta amin'ny fampiasam-bola.
Miorina amin'ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny filazanay fa hamokatra amin'ny tseninay lehibe, dia miasa akaikin'ny mpanjifanay sy ny filany manokana izahay.